Isikhathi siseduze, ukuphela kungenzeka ukuthi umuntu akulula, kepha kumuntu ophikisana naye uhamba njengomuntu osheshayo, unyaka ka-2013 omdala. Ezinye izivivinyo zokuphila, impumelelo, impumelelo kanye nokulahlekelwa zisemva kwethu. Imiphumela yemisebenzi yonyaka ophumayo ishaywa, imibiko yonyaka iphelile, kanti unyaka wesikole kanye nokuphela komnyaka wesigamu wemfundo sekuphelile. Ngokushesha kuyofika iholidi, i-champagne, isihlahla sikaKhisimusi nezipho.
Sekuyisikhathi sokuqala ukucabanga nobani, futhi okubaluleke kakhulu, ukuthi ungabamba kuphi umhlangano weNew 2014, kanti-ke, lapho uzochitha khona amaholide omnyaka omusha owalinde isikhathi eside.
Ngokungangabazeki, ubani lapho, futhi kunakho konke, eCrimea, eya ku-Yalta. Kusukela umkhosi wonyaka omusha eYalta kufana nephupho empeleni. Ku-Yalta, mhlawumbe, ngesikhathi esifanayo ukufudumala ngomzimba nangomphefumulo, ukuphephelela ekuguleni nasekubandleni kwe-megalopolis, futhi ngesikhathi esifanayo ukuzwa ngempela ubusika ngezintaba zeqhwa kanye neqhwa elikhulu ezindaweni ezikuyo izintaba.
Winter Yalta - indaba yangempela yezinganekwane. Omunye angacabanga nje ukuthi ungaya kanjani isithwathwa kanye nokweqa emini, futhi uma unesibindi, ngokuvamile i-snowmobile izokwenza, hamba emathafeni ase-Ai-Petri. Kusihlwa, amadoda asezintweni kanye namakhosikazi ase-stilettos angadabula eduze kwe-Yalta ukumboza, ejabulela ngenkathi ehamba nge-cocktail ekwelapha evela emoyeni ofudumele. Ngamagama, ubuhle!
Azikho izinkinga zokuhlala. Cishe wonke amahhotela adumile aseYalta asebenza ngamaholide omnyaka omusha.
Kulabo abangafuni umsindo, badla, ukuphikisana ngokweqile, izinsizakalo zizobe zifunwa amahotela amancane, noma izindlu zokuzibamba ezizimele. Izindawo zokudlela eziyiningizimu eziseningizimu nazo ziyasebenza.
Kulabo abasebenza ngenkuthalo kulo lonke unyaka, kodwa bengaphathi ukugcina imali eningi yokuphumula e-Yalta ngesilinganiso esikhulu, kuyohlale kunomkhakha wangasese wentando yeningi. Izinhlobonhlobo zokuhlala lapha kuhlu lobubanzi obuhlukahlukene kakhulu.
Kubathandi bezinhlelo zamasiko nokuzijabulisa kukhona ukuphumula okuthandayo. Iningi lezindawo zokungcebeleka zezempilo zikaYalta ziye zahlakulela imibukiso yonyaka omusha wamakhasimende abo.
Kulabo abangajwayele ukukhangiswa kweCrimea kukhona ithuba lokubamba. Ngesikhathi samaholide omnyaka omusha konke kuzosebenza neNdlunkulu yaseVorontsovsky kanye nepaki eyinkimbinkimbi, iNdlu yaseLivadia , isidleke se-Swallow, i- Nikitinsky Botanical Garden, i-Massandra Palace ka-Alexander II.
Ngabathandi bezizwe, ungakwazi ukweluleka ukuvakashela isikhungo se-spa se-Seaside Park, ngoba i-pool ingafinyelelwa ngqo kuLwandle Olumnyama. Kodwa ukubhukuda olwandle, ngoJanuwari kunzima kakhulu.
Kulabo abathanda indlela yokuphila enempilo, umgwaqo oya ezintabeni ezinamaqhwa avuliwe. Akudingekile ukuthatha i-skis, ama-sledges, namanye ama-accoutrements asebusika nawe. Zonke lezi zesekeli zingaqashwa enkonzweni yokuqasha ngenani elilinganayo.
Kubantwana, ulwandle lokujabula nenjabulo luzoletha i-Yalta Zoo, okuyinto le nkathi eyakwazi ukukhulisa imingcele yayo, futhi igcwaliswe nezilwane ezintsha ezingavamile nezinyoni. Kungcono ukulungiselela ukudla izilwane kusengaphambili futhi uthathe nabo, ebusika bavame kakhulu. Futhi futhi ulinde indawo yokuhlanza ngokuphathwa kwe-Yalta.
Yiqiniso, u-Eva Wonyaka Omusha ngeke akwenze ngaphandle kwemilando yendabuko kanye namanoni. Ngaphandle kwama-salutes, iholide ngeke ibe njengoba kufanele.
Uma usenqume ngempela ukugubha u-New Year's Eve e-Yalta, into eyodwa okumele uyicabangele ukuthenga amathikithi esitimela kusengaphambili, noma indiza, ngoba ngamathikithi oqondisa eningizimu, ikakhulukazi kuSimferopol, kungenzeka kube ne-napryazhenka.
Uma unquma ukuhamba, i-Big Yalta izohlinzeka konke okudingekayo ukugubha uNyaka Omusha. Imizwelo eminingi ehlukene, inhlalakahle nenjabulo yomoya kuyoqinisekiswa.
Ngonyaka omusha ozayo 2014, futhi abanye bazokugubha eYalta, eCrimea.
Ukuphumula e-Yalta kuyoba mnandi kunoma yisiphi isikhathi sonyaka. Futhi wonqoba Unyaka Omusha ebusika i-Yalta ingumlando wezinganekwane kuphela. Unyaka omusha we-2014 e-Yalta uyiphupho elizohlala lingokoqobo.
Ihhotela "Wik" (Volgograd). Amakamelo, inkonzo, izindleko
I umbadlana (wesifunda). Idivayisi futhi ukuqokwa umbadlana